အရှင်ပညာဝံသ: August 2011
ဘာဖြစ်လို့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ခဲ့တာလဲ
Posted by Pannavamsa / 4:40 AM / Comments: (0)
ဗုဒ္ဓ သာသန ရံသီ အသင်း မိသားစုများ စုပေါင်း၍ ၀ါဆို သင်္ကန်း ဆက်ကပ်ပွဲကို ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖို့မြို့ Bornheim Saalbau ခန်းမမှာ ၂၄. ၀၇. ၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ကြပါတယ်။ အခမ်းအနားတွင် အင်္ဂလန်မှ သာသနရံသီ ဆရာတော်၊ ဖင်လန်မှ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မရံသီ ဆရာတော် တို့လည်း ကြွရောက် ချီးမြှင့် ပေးခဲ့ ကြပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ စာရေးသူမှ အနု မောဒနာ တရား ဟောကြား ချီးမြှင့် ပေးခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သကဲ့သို့ ကျင်းပပြုလုပ်ကြတာကို တွေ့မြင်ရလို့ ၀မ်းသာကြည် နူးမှု ဖြစ်ခဲ့ရပါ သေးတယ်။ အခမ်းအနား ပြီးဆုံးတဲ့ အခါ ပရိသတ်များမှ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိ ချင်တာများကို မေးမြန်း လျှောက်ထားခဲ့ ကြပါတယ်။
မေးမြန်းကြတဲ့ မေးခွန်းများထဲမှ စာရေးသူအား မေးမြန်းတဲ့ မေးခွန်းက အရှင်ဘုရား ဘာဖြစ်လို့ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ သင်္ကန်း ၀တ်တာပါလဲ၊ အခြားသူများ ပျော်ရွှင်ကြသလို မပျော်ရွှင်ချင် ကြဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်း ပါပဲ။ အဲဒါကို ဖြေပေးပါတဲ့၊ သူသိချင် ပါတယ်လို့ လျှောက်ထား မေးမြန်းပါတယ်။ ဒီမေးခွန်း အမေးခံရတော့ မဇ္ဈိမ ပဏ္ဏာသ ပါဠိတော် (မ၊ ၂၊ ၂၄၅ - ၆) မှာ လာတဲ့ ရဋ္ဌပါလသတိုးသား အကြောင်း သတိရမိခဲ့တယ်။ ရဋ္ဌပါလ သတိုးသားလည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သာသနာ့ဘောင် ၀င်ပြီး ရှင်၊ ရဟန်းပြုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်တဲ့ ဘုရင် ကောရဗျနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ဘုရင် ကောရဗျကလည်း အခုလိုပဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ရှင်၊ ရဟန်း ပြုရတာလဲဆိုတဲ့ အမေးကို ရှင်ရဋ္ဌပါလအား မေးမြန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ မေးမြန်းခဲ့ပုံချင်း တူပေမယ့် ဖြေပုံချင်းကတော့ မတူခဲ့ပါဘူး။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် သင်္ကန်းဝတ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးတယ် ဆိုတာကလည်း အခမ်းအနားတွင် အသင်း အမှုဆောင် ဒကာတစ်ဦးမှ စာရေးသူရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းကို ဖတ်သွားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကလေး ဘ၀ထဲက သင်္ကန်း ၀တ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို သိလို့ မေးတာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း မေးမြန်းတဲ့သူက ငယ်ရွယ်သူ မိန်းကလေး တစ်ဦးပါ၊ သူကလည်း ငယ်ရွယ်စဉ်ထဲက ဂျာမဏီနိုင်ငံကို ရောက်နေတာဆိုတော့ သူ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေမှာ တော်တော်များများ အနောက်တိုင်း အတွေးအခေါ်တွေပဲ ပါဝင်နေတာကို သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဥရောပဘက်မှာက ၁၈ နှစ်ကျော်ရင် ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်ရှိနေပြီလေ၊ မိဘအုပ်ထိန်းမှု အောက်က လွတ်မြောက် သွားပြီ။ သူ့ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိနေပြီ၊ တားပိုင်ခွင့် မိဘတွေမှာ မရှိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီဘက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး မေးမြန်းတာ ဖြစ်မယ်လို့လည်း ယူဆမိပါတယ်။
စာရေးသူ ငယ်စဉ် ကလေး ဘ၀ထဲက သင်္ကန်း ၀တ်ခဲ့တာဟာ မိဘများက ရှင်ပြုပေးခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ အရ ယောက်ျားလေး မှန်သမျှ ကလေးဘ၀မှာ မိဘများ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ကြတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ရှင်သာ မဏေ ပြုပေးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ မိဘများကလည်း သူတို့ရဲ့ သားယောက်ျား ကလေးတွေကို ရှင်သာမဏေ ပြုပေးရမယ် ဆိုတဲ့ ဆန္ဒ သူတို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာ အမြဲကိန်းဝပ်လျက် ရှိခဲ့ကြ ပါတယ်။ ရှင်သာမဏေ ပြုပေးလိုက်ရမှ သူတို့အတွက် တာဝန် ကျေတယ်လို့လည်း ယူဆထား ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စာရေးသူလည်း ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ် ကလေးဘ၀မှာ သင်္ကန်းဝတ် ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာလည်း အနည်းဆုံး ခုနစ်ရက်ခန့် ၀တ်ကြရပါတယ်။ မပျော်လို့ လူဝတ်လဲလိုပါက လဲနိုင်ပြီး၊ ပျော်ရင်လည်း ပျော်သလောက် ဆက်ဝတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ သင်္ကန်းဝတ် ရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိနားလည်၍ ၀တ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ၊ သင်္ကန်းဝတ်စဉ် အခါမှာလည်း ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ တိုင်ပေးတာကို နောက်က လိုက်ဆိုပြီး ၀တ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဘာကြောင့်ပဲ ၀တ်ခဲ့ရ ၀တ်ခဲ့ရ အဲဒီလို အလှူအတန်းပြုလုပ်ပြီး ၀တ်ပေးလိုက် ရတာကိုပဲ ရှင်သာမဏေရော၊ မိဘများ ဆွေမျိုးများပါ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက် နေကြတာကို တွေ့မြင် သိရှိခဲ့ရ ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဆရာဘုန်းကြီးမှ ဘာသာရေး အခြေခံ စာပေတွေကို တစ်စတစ်စ သင်ကြား ပေးခဲ့ပါတယ်။
အခြေခံစာပေများ အတန်အသင့် ရှိလာတဲ့အခါ သင့်ရာအပ်ပို့ ဆရာတို့ ဆိုတဲ့ ဆရာတို့ရဲ့ ၀တ္တရား အတိုင်း သင့်တော်မည့် နေရာကို ဆက်လက် ပို့ဆောင်ပေးပြီး ပညာရည်နို့ သောက်စို့ စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ အဆင့်ဆင့် စာပေ ကျမ်းဂန် ပညာရပ်များကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ သင်ယူပြီးတဲ့ အခါ ပျော်ရွှင်ချင်တဲ့ စိတ်ကို ဦးစားမပေးဘဲ သင်ယူ တတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာရပ်များကို ပြန်လည် ပို့ချပေးချင်၊ ဖြန့်ဖြူးပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အဲဒီဘက်ကိုပဲ ဦးစားပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် ပရဟိတ စိတ်ဓာတ်၊ သာသနဟိတ စိတ်ဓာတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း မိဘ ဆရာ သမားများရဲ့ လမ်းညွှန်မှုရယ် ၊ ပင်ကိုယ် စိတ်ဓာတ်ရယ် တို့ကြောင့်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆက်လက်ပြီး သာသနာ့ တာဝန်များကို စွမ်းနိုင်သမျှ ထမ်းဆောင်နေခြင်း ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ရပါတယ်။
ဂျာမဏီ၊ ဖရန့်ဖို့မြို့ သမိုင်းဝင်တံတားပေါ်မှ အမှတ်တရ
Posted by Pannavamsa / 9:37 AM / Comments: (0)
ဗုဒ္ဓသာသန ရံသီ အသင်းဟာ ဂျာမဏီ နိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖို့မြို့ရဲ့ စည်ကား သည့် နေရာလို့ သတ်မှတ် လို့ရတဲ့ နေရာတွင် တည်ရှိပါတယ်။ သာယာ အေးချမ်းတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်သလို အပန်းဖြေ အနားယူရန် ကောင်းတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နံနက် စောစောဖြစ်စေ၊ ညနေပိုင်းဖြစ်စေ အနားယူ အပန်းဖြေ လမ်းလျှောက် ထွက်ရန် အလွန် သင့်လျော် လှပါတယ်။
အသင်း တိုက်ဟာ မြစ်ကမ်း အနီးတွင် တည်ရှိပါတယ်။ မြစ်ကမ်းခြေ တစ်လျှောက် ဂျာမဏီ မြို့သူ၊ မြို့သား အများအပြား နေ့စဉ် အပန်းဖြေကြ၊ အပြေး လေ့ကျင့်ကြ၊ စက်ဘီး စီးကြနဲ့ ကျန်းမာ ရေးနဲ့ အညီ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့ အကောင်းဆုံး နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ ဆိုရင် အပျော်တန်းစီး လှေများ ငှားရမ်း ပြီး လှေလှော် ထွက်ကြ တာဟာလည်း ပျော်ရွှင် ကြည်နူးမှုကို ဖြစ်စေ သကဲ့သို့ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဖရန့်ဖို့ ဖြစ်ကမ်းပေါ်တွင် တံတား အစင်းပေါင်း များစွာကိုလည်း တည်ဆောက် ထားပါတယ်။ တံတားပေါင်း များစွာအနက် ဤတံတားဟာ သမိုင်းဝင် တံတား တစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရုရှားအစိုးရမှ တည်ဆောက် ပေးထားတဲ့ တံတားဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ တံတားများ အားလုံးဟာ အသစ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ တံတားတွေချည်းပါပဲ။
ဖရန့်ဖို့မြို့ရဲ့ မြစ်ဆိုပေမယ့် မြန်မာ ပြည်က မြစ်များလို အကျယ်ကြီး မဟုတ်ပါ၊ မြန်မာပြည်က ချောင်းတွေ လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ သို့သော် သန့်ရှင်းမှု သပ်ရပ်မှုက အလွန်ပဲ ကွာခြားလှပါတယ်။ မြစ်ကမ်း တစ်လျှောက် ကတ္တရာလမ်း ခင်းပေးထားပြီး အနားယူ အပန်းဖြေရန်လည်း ထိုင်ခုံများ စီစဉ် ပေးထားပါတယ်။ ရေပေါ် စားသောက် ဆိုင်များကိုလည်း ဖွင့်လှစ် ရောင်းချ ပေးထားပါတယ်။ ဂျာမန် လူမျိုးတွေဟာ ခွေးကလေးများ ငှက်ကလေးများကို ချစ်ခင်ကြတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ မြစ်ကမ်းခြေ တစ်လျှောက်မှာ ခွေးကလေးများနဲ့ လမ်းလျှောက် ထွက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ရေဘဲများကို အစားကျွေး မွေးလေ့လည်း ရှိကြတယ်။ အခုရာသီဟာ နွေရာသီဖြစ်လို့ ရေဘဲငှက်များကို လာရောက်လွှတ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး ဆောင်းရာသီရောက်တဲ့အခါမှာ ရေဘဲငှက်များ အားလုံးကို ဖမ်းပြီး နွေးထွေးတဲ့ နေရာတွေ ထားပေးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီက နွေရာသီဆိုပေမယ့် မြန်မာပြည်က ဆောင်းရာသီလောက် အေးနေပါ သေးတယ်။
အခုအချိန်မှာ ဂျာမဏီ နိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖို့မြို့ရဲ့ ရာသီဥတုဟာ အကောင်းဆုံး အချိန်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အအေး သက်သာတဲ့ အချိန်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ နွေရာသီ အချိန်လို့ ဆိုကြပေမယ့် မိုးလည်း မကြာမကြာ ရွာလေ့ရှိပါတယ်။ နေထိုင်လို့ အကောင်းဆုံး အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀ လပိုင်းရောက်ရင် ဆောင်းရာသီကို ရောက်မှာပါ၊ အဲဒီ အချိန်ဆိုရင် အပြင်မထွက်ချင် လောက်အောင် အေးလွန်းတဲ့အတွက် တိုက်ခန်းတွေထဲမှာ အနွေးပေး စက်တွေ အမြဲ ဖွင့်ထား ရတယ်၊ ဆီးနှင်း တွေကလည်း ထူထပ်စွာ ကျလေ့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နံနက် စောစော ဒကာတစ်ဦးနှင့် အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း ဒကာ ပြောပြသမျှ အမှတ်တရ မှတ်တမ်း တင်ထား လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သိက္ခာထပ် အလှူတော် မင်္ဂလာ
Posted by Pannavamsa / 6:57 AM / Comments: (0)
စာရေးသူ အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်ပြီးနောက် ဂျာမဏီ နိုင်ငံသို့ ကြွရောက်ရန် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဂျာမဏီ သံရုံးတွင် ဗီဇာ လျှောက်ထား ခဲ့ရပါတယ်။ ဗီဇာရ ပြီး၍ ဂျာမဏီသို့ မကြွ ရောက်ခင် ဇာတိမြို့သို့ ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ စာရေးသူ ငယ်စဉ်က ပညာရည်နို့ သောက်စို့ ခဲ့တဲ့ မိခင် ကျောင်းတိုက်သို့ ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆရာတော်နှင့် မိဘတို့အား အသိပေး လျှောက်ထားရန် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်အား ဂျာမဏီနိုင်ငံသို့ စာရေးသူ ကြွရောက်ရမည့် အကြောင်း လျှောက်ထားရင်း ဂျာမဏီမှ ပင့်ဖိတ်သည့် စာကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်မှ စာရေးသူအား ကြွရောက်ရမည့် ရက်ကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် စာရေးသူအား ရန်ကုန်မှ ဦးရှုအောင် + ဒေါ်အေးအေးဝင်း မိသားစုတို့ သိက္ခာထပ် ပေးမည့် အကြောင်း မိန့်ကြားပါတယ်။ ဂျာမဏီသို့ မကြွခင် သိက္ခာထပ် အလှူတော် မင်္ဂလာကို ကွမ်းခြံကုန်းမြို့၊ ဓမ္မိကာရုံ ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မေတ္တာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်းမှ အလှူရှင် ဦးလွင်သိန်း + ဒေါ်တင်အေး၊ ဒေါ်အေးအေးဝင်း၊ ဒေါ်စန်းစန်းနုတို့ သိက္ခာထပ်ရန် သင်္ကန်း ပရိက္ခရာများ ဆက်ကပ်နေစဉ်
မေတ္တာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်း ဒကာမကြီး ဒေါ်တင်အေးနှင့် အတူ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်နေစဉ်
ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဖရန့်ဖို့လေဆိပ်သို့ စတင်ရောက်ရှိခဲ့စဉ်
Posted by Pannavamsa / 4:49 AM / Comments: (0)
ဖရန့်ဖို့မြို့၊ ဗုဒ္ဓသာသန ရံသီတွင် သီတင်းသုံးရန် အသင်း အမှုဆောင် များက ပင့်ဖိတ်ခဲ့ကြ သဖြင့် ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖို့မြို့သို့၊ မလေးရှား အဲယားလိုင်းဖြင့် ထွက်ခွါခဲ့ ပါတယ်။ ဂျာမဏီ နိုင်ငံသို့ ရန်ကုန်မှ မလေးရှားသို့ ဦးစွာ ထွက်ခွါခဲ့ပြီး မလေးရှားမှ တစ်ဆင့် ဖရန့်ဖို့မြို့သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွါခဲ့ ရပါတယ်။ မလေးရှား လေဆိပ်တွင် ဖရန့်ဖို့သို့ ပျံသန်းထွက်ခွါမည့် လေယာဉ် စောင့်ဆိုင်း နေစဉ် ဖရန့်ဖို့မြို့တွင် နေထိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်မှ ဒကာ တစ်ဦးနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ဒကာနဲ့ အတူ ဖရန့်ဖို့မြို့သို့ ထွက်ခွါခဲ့ပါတယ်။ ဒကာရဲ့ နာမည်က ဦးတင်ထွန်းပါ။ ဒကာ ဦးတင်ထွန်းရဲ့ အကူအညီဖြင့်လည်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ခဲ့တဲ့ အတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင် ခဲ့ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်း အမှုဆောင် ဦးသိန်းယု၊ ဦးတင်ထွန်း တို့နှင့် ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်မြို့၊ ဖရန့်ဖို့ လေဆိပ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ ကြစဉ်က အမှတ်တရ
အသင်း အမှုဆောင် ဦးသိန်းယု၊ ကိုအောင်ဇေယျ (ခ) ကိုဖိုးလပြည့်တို့ ဖရန့်ဖို့ လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုခဲ့စဉ်က အမှတ်တရ
article (38) home (2) photo (2) video (1)
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ (Frankfurt, Germany)
Copyright © 2009 အရှင်ပညာဝံသ | Designed by Free CSS Templates | Blogger Templates by TeknoMobi